Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya: Sheikh Saadiq Eenow
Dib u eegista Taariikhda Soomaaliya: Sheikh Saadiq Eenow - Qaybta: 1aad
Taariikhdaadaa marka aad taqaanid ayaad hore u socon kastaa....
SomaliTalk.com | July 26, 2010
Labadii boqol (200) ee sano ee ugu danbeeyey oo ah qarnigii 19aad (1800 - 1900) iyo qarnighii 20aad (1900 - 2000) bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Geeska Afrika ma soo marin 10 sano oo xiriir ah oo nabad ah ama ay nabad ku sugnaayeen ma soo marin.
Bilowgii qarnigaas 19aad waxaa Soomaaliya ku soo batay ganacsiga iyo doonyaha. Waxaana bartamihii qarnigaas bilowday sahanadii reer Yurub. Maadaama xeebahaas geeska Afrika ay ku soo bateen doonyaha iyo ganacsigu waxaa Ingrisiiskii degeen oo saldhig ka dhigteen Cadan (halkaas oo maxmiyad u ahayd intii u dhaxaysay 1937 - 1963). Cadan waxay Ingriiska u noqotay meel doonyihiisa u socda Bariga-fog ay ku sii nastaan oo shidaalka iyo sahayda ka sii qaataan, waxayna noqotay meel camiran.
"Burcad badeedii Soomaalidii hore oo sabab u noqotay inaan Soomaalida la addoonsan iyo in la joojiyo maraakiibtii sidey dadka la adoonsanayey"
Tusaale ahaan Buugga "Periplus of the Erythrean Sea" oo laguqoray Afka Giriigga, oo laqoray qarnigii koowaad (100 AD) waxaa ku qoran in dadka deganaa xeebaha Soomaaliya ay haysteen ganacsi badeed hodon ah. Isla markaas waxa uu qoraagu ka digey xeebahaas Soomaaliya (oo loo aqoon jirey Azania) oo uu yiri "waxaa ku sugan rag u dhaqma sida burcad-badeeda," ee yaan loo dhowaan xeebahooda.
Buugga Claudius Ptolemy, (Geographia) oo la daabacay 150 AD, waxa uu tilmaamay in geeska afrika meel koonfur kaga beegan barta lagu magacaabo Raas Gardafuul (Cape Guardafui) oo ku taal xeebta Soomaaliya oo xilligaas loo aqoon jirey Gacankii Berbera (Gulf of Barbaria), in ay joogeen "Dad hannaan qurux-badan oo joog-buuxa oo xoog waaweyn, kuwaas oo ah burcad badeed, oo deggan xeebta oo dhan, halkaasna ka samaysay caaqillo ama jiifaf."
Kun iyo toddoba baqol oo sano ka bacdi, markii la soo gaarey 1854, nin u dhashay dalka Britain oo layiraahdo Richard Burton oo safar ku tegey marsada Berbera, ayaa waxaa walaac ka muujiyey saraakiishii Britain ee ku sugnaa Cadan. Xilligaas werar lagu qaado donyahay maraya gacanku waxa uu aha joogto. Waxaana 1826 la diley sarkaal la oran jirey Major Gordon Laing markii uu ka soo laabtay magaalada Harar. Richard Burton buugiisa "First Footsteps in East Africa" oo uu kag asheekaynayo safarkiisii Harar, waxa uu ku qoray in markii ay isu diyaarinayeen in ay ka baxaan Berbera in la weerar, oo lag adiley nin la oran jirey Stroyan, islamarkaasna la dhaawacay John Speke iyo Burton naftiisa.
Sannadkii 1820 waxaa boqortooyadii Ingriisku ay heshiis la gashay Sheikhyadii Carbeed ee ku xeernaa badda Khaliijka Berbera si loo nabadeeyo Badda Gacanka, halkaas oo ay xilligaas ku baahdey Burcad-badeed. Heshiiskaas waxaa la yiraahdaa "The General Treaty of Peace, 8 January 1820."
Heshiiskaa iyo mid ka dambeeyey oo la sii faahfaaiyey oo dhacay 1839 waxaa lagu qeexay in in la adoonsado ama la iibsado "rag iyo dumar da'dii ay doonaan ha ahaadeene" oo ah dadka qabaai'lka Soomaaliyeed, arrintaas iibsiga dadka oo qudheeda loo tixgeliyey in ay tahay burcad-nimo.
Baaritaankasi intii uu socday ayaa guddii waxay su'aalo weydiiyeen sarkaal ka tistaanaa maamulkii maxmiyaddii Ingriiska, waxaana la weydiiyey su'aalah:
Dhammaan ma Afrikaan baa? haa ayuu yiri sarkaalkii, oo intaas raaciyey ma arkin ama "ma ogi dad carab ah oo addoon ah",
ma jiraan weligeed Soomaali noqotay addoon? markii la weydiiyey waxa uu sarkaalkii ku jawaabay "waa wax naadir ah, Soomaalidu iyagaa addoonta sii xada, laakiin weligay iyo abidkay ma arkin Soomaali addoon ah, haddii ay jiraanaa waa dhif iyo naadir.
October 1855 ayaa boqortotooyadii Ingriiska governrkiiu joogey Cadan waxa uu qabaa'ilka Soomaali ah la saxiixday in haddii la arko markab sida addoomo in markabkaas la qabto oo lala wareego isla markaasna dadka addoonta ah ee saaran la siidaayo ama la xoreeyo. Sidoo kale November 7, 1856 ayaa waxaa magaalada Berbera waxaa heshiiska ku kala saxiixday sarkaal Ingriiska u fadhiyey Cadan oo u qaablisanaa siyaasadda iyo beesha Habar Awal ee Soomaaliyeed. Qodobka 4aad ee heshiiskaasi waxa uu dhigayey in gebi ahaanba la joojiyo oo addoon la soo marsiin karin Berbera iyo gebi ahaan dhulka beesha.
1825kii waxay ahayd markii u horeysey ee Ingriiska uu damco Soomaaliya. Doon uu leeyahay Ingriisku ayaa lagu afduubtay Berbera. Dadkii lasocdeyna waa la laayey, hantidiina waa la dhacay. Markaas ayaa sarkaal Ingiriis ah waxa uu yimid xeebaha Soomaaliyeed waxana uu heshiis la galay qabaa'ilka degganaa xeebaha si uu ammaan uga helo iyo in ay magdhaw ka siiyaan doontii iyo dadkii laga laayey, haddii kale waa ku soo duulayaa, qabaa'ilkii heshiiskaas waa ogolaadeen.
Waxaa jirey 1874 ayadoo hayaamadii sahamintu ku socotey dhulka Soomaalida, oo qabaa'il is laynayaan, ayaa magaalada Cadan markii ay camirantay ayaa waxaa dhacday in dadkii ku noolaa dhanka xeebta Soomaaliya uu soo geliyay kharash badan. Marka reerkii meesha ka xigey reeraha kale waxa uu yeeshay hanti badan, halka reerihii dhulka gudaha ku jirey ay weli ahaayeen geeley sabool ah. Waxaa dhacay khilaaf xoog weyn.
1854 - Waxaa Soomaaliya sahan ku tegey laba kabtan oo ah Burton iyo Speke.
1883 - M. Revoil ayaa sahan ku tegey Jubbada Sare ee Soomaaliya
1884-1885 - Sahan u wato F.L. James ayaa garey Soomaaliya
1890-1892 - Waxaa Soomaaliya sahan ku tegey safar Talyaani ah, gaar ahaan sahankaas waxaa ka mid ah aa Signor Robecchi, Lieutenant Baudi di Vesme, Prince Ruspoli, Captain Battego iyo Captain Grixoni.
Ka hortaggaas taariikhda waxay xustaa qabaa'ilka Biyo-maal dhaqdhaqaaqoodii xoogga lahaa ee iska caabinta gumaysisga. Waxa kale oo taariikhdu xustaa kacdoon ka dhacay Kismaayo. Kacdoonadas marka la isku daro kii u weynaa waxa uu ahaa Kacdoonkii Daraawiishta ee socdey 20 sano. Kaas oo markii dayuurado loo adeegsadey aakhirkii la jebiyey 1921.
Buugii laga qoray Seyid Maxamed Cabdulle Xasan, ninka qoray buugga "Mad Mullah" oo ah ninkii jebiyey waxa uu sheegayaa in Seyidka iyo ciidamadii Daraawiishtu ay ahaayeen dad wadaniyiin ah, oo dalkooda u diidanaa in la guamsto. Sharafna waxa qofka ugu filan waxa uu u qiro ama ictiraafo kii isaga ka soo horjeedey.
Boqor Cismaan: waxa Talyaanigii u soo qoray waraaq, lagu amrayo in uu hubka dhigo oo is dhiibo. Wuxuu markaas Boqor Cismaan shiriyey raggiisii oo uu weydiiyey "ma is dhiibnaa, mase weynu dagaallanaa". Waxaa shir bil qaatay ka socdey meesha la yiraahdo Noobir, waxaana laga tashanayey arrintaas. Waxaa halkaas laga soo saaray go'aan in aysan is-dhiibayn. Markaas ayaa Talyaanigii weerar oo boqorkiina qabtay, magaalooyinkii lala dhacay madaafiic, laba sano ayaa dagaalkaasi socdey.
Qalin ku difaacii Xaaji Faarax Omaar: Waxay firfircoonidiisii si weyn u soo shac baxday wixii loo gaaray sannadkii 1920. Waxana uu biloaabay in uu Soomaaliya oo dhan u hadlo oo u noqdo abuukaato ama u doode. Isagoo ah dhallinyaro ayuu raadiyey Taarka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingriiska. markii uu helay ayuu u diray Taar ay ku qoran tahay "HAYAAY, HAYAAY, HAYAAY,". Taarkii markuu ku dhacay wasaaradda Arrimaah dibadda Ingriiska, ayey is weydiiyeen luqaddaas, markii la arkay in uu ka yimid Hargeysa ayaa la raadiyey qof Soomaali ah oo garanaya afkaas. Waxaa markaas magaalada (London) wax Soomaali ah laga helay Caabi Faarax. Odaygii ayaa loo yeeray oo la weydiiyey macnaha kelmedaahaas in uu tarjumo, wuxuu ku tarjumay "Ayadoo aad joogtid meel mugdi ah, oo ay tahay habeen, oo hawd dherer badan oo roob iyo daruur adduunkii xiray, adiguna aad huruddo, haddii libaax halkaas bawdada ah kugu dhego oo kula booday, nin dhehi waayey 'war iga dhiga' ayaa waxa uu dhahaa: hayaay, hayaay, hayaay." Markaas ayaa Ingriiskii waxay fahmeen in meeshaan wax culusi jiraan. Baarlamaankii wuxuu ku khasbanaaday in uu wafti u soo diro Hargeysa. Markii la arkay firfircoonidii Oomaar iyo inuu u doodayo dadweynaha waa la masaafuriyey, waxaana la geeyey Cadan. Dhaqdhaqaaqiisii ma damin, waxanauu sii wadey dagaal nabad ah oo uu doonayey in uu xaqa shacabka ku soo dhiciyo.Waxana uu geeriyooday 1948 isagoo weli ku jira halgankii.
Baraarujintii Xaaji Aaden Axmed Afqallooc: oo ahaa aftahay waxa uu furtay afkiisa si uu u baraarujiyo Soomaalida, oo tusa waxa ay midnimadu tahay. Waxana uu tirin jirey gabayo iyo suugaan uu ku guubaaniyo dadka si ay heeryada gumaysiga isaga qaadaan. Xaaji Aaden Afqallooc waxa uu geriyoodey 1986 isagoo aad uga weyn 100 sano-jir. Waxana uu Soomaalida uga tegey gabayo taariikhi ah oo Soomaalida ku tusayey waxa ay tahay Soomaalinimadu.
Dagaalkii 2aad ee Adduunka ayaa dhacay (oo socdey 1939 - 1945). Dagaalkaas intii uu socdey waxaa Soomaali u kacay dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka ahaa ee leegada oo ay hor seedayeen dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaa ururka dhallinyarada ee SYL la asaasay 1943.
Maxamed Saalax Ladane oo 96-jir ah oo weli nool, kana mid ahaa raggii laf dhabarta u ahaa leegada, waxa uu Saadiq Eenow u sheegay "shan (5) nin oo keliya ayaa wax qoraal qori kara nagu jirey markii halgankaas leegada la bilaabayey, shan nin oo keliya oo la dhehi karo hebel-iyo-hebel. Laakiin dadka qalbigooda ayaa wanaagsanaa, taas oo ahayd aqoon. Laakiin maanta waxaad tihiin dad kumayaal ah oo haysta shahaadooyinka ugu sareeya." Halkaas oo uu ku muujinayey ama ku hoga tusaalaynayey qalbig afiyow in uu wax qaban karo.
Waxaa markaas bilowday 9 sano oo ay Soomaali u dhisantay dawlad rayad ah, waxaana is bedeley saddex ra'iisul wasaare kuwaas oo mid kasta uu ka tegey taariikh culus. Cabdirashiid Cali Sharmaarke (12 Jul 1960 - 14 Jun 1964), Cabdulrasaaq Xaji Xuseen (14 Jun 1964 - 15 Jul 1967) , Maxamad Xaji Ibrahim Cigaal (15 Jul 1967 - 1 Nov 1969). Waxaa ka nool C/risaaq Xaaji Xuseen oo xilligan deggan Minneapolis.
AKHRI Qaybta 2aad...
Dhegeyso Dr. Saadiq Eenow (Q.1aad) ama soo rogo (mp3)
Faafin: SomaliTalk.com | July 26, 2010
A Collection of Treaties, Engagements and Sunnuds Relating to India and Nearby Countries - Turkish Arabia, Persian Gulf, Arabia and Africa ... By C. U. Aitchison
The legal status of the Arabian Gulf States: a study of their treaty relations and their international problems... By Husain M. Albaharna
The new Larned History for ready reference, reading and research ..., Volume 1 By Josephus Nelson Larned
Scramble for Africa... By Thomas Pakenham Afrika waxaa loo kala jarjaraysida keega (cake), qaybo ay liqeen afar dal oo xafiiltamayey - Germany, Italy, Portugal, France iyo Britain (waxaana luf-luf qaatay Spain).
Warbixintan waxaa linkigeedu waa: http://www.somalitalk.com/saadiq/